तिहारको मुख्य दिन आज भाइटीका : 'उत्तम साइत ११ बजेर ३७ मिनेटमा' - Demo Khabar
बुधवार, माघ ७ २०७७Jan 20 2021
सोमवार, मंसिर १ २०७७
काठमाडौं, मंसिर । तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकअर्कालाई टीका लगाइदिएर मनाइँदै भाइटीका पर्व मनाइँदै छ । यस दिन दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुले एकअर्कालाई टीका लगाइदिएर येश, ऐश्वर्य, दीर्घायु र समृद्धिको कामना गर्दछन् ।
टीका लगाइदिइसकेपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटीलगायतका खानेकुरा दिन्छन् । दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छेअनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने परम्परा छ ।
भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ३७ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
राज्य सञ्चालकले साइतमै टीका लगाउनु पर्ने र सर्वसाधारणले भने दिनभरी नै टीका लगाउन सक्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतम बताउँछन् ।
मंसिर १ गते सोमबार मध्याह्नकालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेका लागि मकर लग्न, वृष नवमांश, अभिजित् मुहूर्तको शुभसाइत दिइएको समितिले जनाएको छ । मंसिर १ गते भाइटीकाकै दिन यस वर्ष नेपाल संवतको नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।
मंसिर २ गते बिहान ७ बजेर ४ मिनेटसम्म मात्र द्वितीया तिथि रहेकाले मंसिर १ गते नै भाइटीका मनाउन शास्त्रसम्मत हुने समितिको ठहर छ ।
मंसिर २ गते बिहान पनि केही समय द्वितीया तिथी रहेकाले नेवार समुदायका केही व्यक्तिहरुले मंगलबार भाइटीका मनाउने भनी निर्णय गरेका छन् । त्यसैले सरकारले मंसिर २ गते पनि देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
सोमवार, मंसिर १ २०७७१०:१५:०३
भारत ले नेपाललाई १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने : "सम्झाैता पत्रमा हस्ताक्षार"
नेपालमा कोरोना : " ३१८ सङ्क्रमित थपिए, ३८३ निको भए"
कांग्रेसकाे विरोध प्रदर्शन : "देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा कार्यक्रम गर्दै"
प्रधानन्यायाधीशले साेधे : "बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन ?"
विदाई सम्बोधनमा ट्रम्पले भने : "हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदैछ"
थारु समुदाय : " आजदेखि माघी (माघ) पर्व सुरु"
जाडो मौसम विस्तारै शुरु : "यी पाँच तरकारी खाँदा शरीरलाइ राम्राे"